Wararka - Cutubka Dhuumaha Welded Longitudinal ee Habka Wax -soo -saarka waa maxay?
Cutubka Biibiilaha Welded Longitudinal ee Geeddi -socodka Wax -soo -saarka waa maxay?
Habka wax -soo -saarka mashiinka alxanka dhaadheer waa mid fudud, hufnaan wax -soo -saar sare, qiime jaban iyo horumar degdeg ah. Awoodda biibiilaha welded ee muquunku guud ahaan wuu ka sarreeyaa toobinta tooska ah ee tolmoon, tubbada waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro dhexroor ka weyn tuubbo alxanka leh oo cidhiidhi ah, laakiin sidoo kale ballaadh isku mid ah soo -saarka biibiilaha billet ee dhexroor kala duwan. Si kastaba ha noqotee, marka la barbar dhigo isla dhererka biibiilaha toosan, dhererka alxanka ayaa kordhay 30 ~ 100%, heerka wax soo saarkuna wuu hooseeyaa.
Sidaa darteed, dhexroorka yar ee inta badan isticmaalka toobinta tooska ah ee biibiilaha welded, dhexroor weyn oo biibiile alxanka ah ayaa inta badan la adeegsadaa muquuninta alxanka.
1. Bixinta dareeraha cadaadiska hooseeya ayaa biibiile bir ah oo la shubay (GB / T3092-1993) oo sidoo kale loo yaqaan tuubooyinka alxanka guud, oo badanaa loo yaqaan tuubada madow. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daabaco biyaha, gaaska, hawada, saliidda iyo uumi kululaynta iyo dareeraha kale ee cadaadiska hoose ee guud iyo isticmaalka kale ee biibiilaha birta ah. Dhumucda derbiga biibiilaha waxaa loo qaybiyaa birta caadiga ah iyo biibiile bir qaro weyn leh; la wareegida foomka waxaa loo qaybiyaa tuubo aan dun lahayn Tilmaamaha biibiilaha birta oo leh dhexroor magac u yaal ah (mm) ayaa sheegay in dhexroorka magacaaban uu yahay dhexroor qiyaas ah. Caadiyan loo adeegsado caadooyinka, ayaa sheegay in gudbinta dareeraha cadaadiska yar ay ku dhegan tahay biibiile bir ah oo la shubay oo la isticmaalay marka lagu daro gudbinta tooska ah ee dheecaanka, laakiin sidoo kale tiro badan oo ah tuubo gudbinta dareeraha cadaadiska hooseeya oo loo isticmaalo tuubbada alxanka galvanized.
2. Bixinta dareeraha cadaadiska hooseeya galvanized biibiilaha birta alxanka leh (GB / T3091-1993), oo sidoo kale loo yaqaanno biibiilaha birta alxanka galvanized, oo badanaa loo yaqaanno biibiile cad. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daabaco biyaha, gaaska, saliidda hawada iyo uumi kululaynta, biyaha diirran iyo dareeraha cadaadiska guud ee kale guud ahaan ama isticmaalka kale ee tuubada galvanized-galvanized (alxanka ama alxanka). Dhumucda derbiga biibiilaha ayaa loo qaybiyaa tuubbo bir ah oo galvanized caadi ah iyo dhumuc bir ah oo galvanized ah; qabashada foomka waxaa loo qaybiyaa tuubbo bir-galvanized ah oo aan dun-lahayn iyo dunta birta galvanized. Tilmaamaha biibiilaha birta oo leh dhexroor magac u yaal ah (mm) ayaa sheegay in dhexroorka magacaaban uu yahay dhexroor qiyaas ah. Caadi ahaan loo isticmaalo inji ayaa yiri, sida 11/2 iyo wixii la mid ah.
3. Kaydka birta kaarboonka caadiga ah (GB3640-88) waa dhismayaasha warshadaha iyo kuwa madaniga ah, rakibidda mishiino iyo qalab iyo mashaariic kale oo koronto lagu rakibo si loo ilaaliyo dhuumaha birta siligga ah.
4. Tubbada toosan ee biibiilaha birta ah (YB242-63) waa tuubo alwaax dheer iyo tuubo bir ah. Caadiyan loo qaybiyey biibiile bir ah oo alxanka leh, tuubooyin dhuuban, derjiyeyaal, tuubooyin qaboojin iyo wixii la mid ah.
5. Bixinta dheecaanka cadaadiska ee tuubada weelka alxanka ah ee hoos-u-miiqday (SY5036-83) waa dhuuban bir-duub leh oo loogu talagalay tuubbada oo bannaan, oo leh qaab muquuninta heerkulka qolka ah, oo leh hab alxanka arc oo laba dhinac leh biibiile bir ah. Biraha cadaadiska adag, waxqabadka alxanka, ka dib baaritaanno iyo tijaabooyin saynis oo kala duwan oo kala duwan, adeegsiga ammaan ah oo la isku halleyn karo. Tuubo bir ah oo dhexroor weyn ah, oo gudbisa wax -ku -oolnimo sare, waxayna badbaadin kartaa dhigista maalgelinta dhuumaha. Inta badan loo isticmaalo daabulka dhuumaha saliidda iyo gaaska dabiiciga ah.
6. Bixinta dheecaanka cadaadiska ah ee isku-dhafan ee biibiilaha birta ee alxanka badan leh (SY5038-83) waa xarig bir-duuban oo duuban oo loogu talagalay tuubada oo madhan, heerkulka qolka wax-ka-beddelka muquuninta, habka alxanka dhabta ah ee soo noqnoqda ee keenista dareeraha cadaadiska leh biibiile bir alxanka. Biraha cadaadiska adag, balaastigga, iyo alxanka fudud iyo waxaynta mashiinka; ka dib tijaabooyin iyo tijaabooyin kala duwan oo adag oo cilmiyeysan, adeegsiga aamin, la isku halleyn karo, dhexroor biibiile bir ah, wax -ku -oolnimada gudbinta oo sareysa, waxayna badbaadin kartaa dhigista maalgelinta dhuumaha. Badanaa waxaa loo adeegsadaa dhigista gaadiidka dhuumaha saliidda, gaaska dabiiciga ah iyo wixii la mid ah.
Waqtiga dhejinta: Jul-26-2021